Global Voices teny Malagasy » Ako avy amin’ny tontolon’ny bilaogy Toniziana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 31 Oktobra 2018 16:22 GMT 1	 · Mpanoratra Mohamed Marwen Meddah Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Tonizia, Fanabeazana, Fanatanjahantena, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fivavahana, Mediam-bahoaka, Mozika, Politika, Teknolojia
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny volana Mey 2006)
Malaza tamin'ny lohahevitra samihafa toy ny mahazatra ny tontolon'ny bilaogy Toniziana, manomboka amin'ny tena matotra hatramin'ny maivamaivana kokoa, ary topi-maso momba ireo lohahevitra mahaliana sasany noresahana nandritra ny 2 herinandro lasa ireto manaraka ireto.
Atombontsika amin'i Zizou izay manoratra momba ny eritreriny fa mameno ny fiarahamonina Arabo ny revolisiona Islamista, ary na dia mihena aza izany any Tonizia noho ny politika sy fanapahan-kevitry ny governemanta, dia misy izany, ary mihevitra izy fa tokony tohizan'ny governemanta sy atao ofisialy ny maha-laika an'i Tonizia mba hanamafisana ny fisarahan'ny fanjakana sy ny fivavahana.
Manoratra momba ny fanabeazana any Tonizia i Tarek, mikasika ny maha-maimaim-poana izany amin'ny sehatra rehetra, sy ny fomba fiheviny fa haitraitra fotsiny izany ao amin'ny firenena an-dalam-pandrosoana tsy mahavita izany akory. Mihevitra izy fa tokony hampidirina ao amin'ny rafi-pianarana ambony Toniziana ny saram-pianarana  mba hanampy amin'ny famatsiam-bola ny fikarohana, mandoa karama tsara ho an'ny mpampianatra, mampihena ny trosan'ny firenena ary mampianatra ny mpianatra mba hiantehitra bebe kokoa amin'ny tenany sy hiasa mafy kokoa.
Mifangaro ny fanehoan-kevitra ao amin'ny lahatsoratra eo amin'ireo olona mitovy hevitra sy ny hafa manohitra izany.
Nipoitra ny lohahevitra iray hafa mampiady hevitra rehefa nanoratra mikasika ny fomba fijeriny i Mars fa tokony hanatsara ny fifandraisana amin'i Isiraely i Tonizia . Mihevitra izy fa ny Toniziana, amin'ny maha-olombelona, dia tsy manana fankahalana amin'ny Israeliana. Milaza ihany koa izy fa andraikitry ny firenena ny miaro sy manome tolotra ho an'ny Toniziana rehetra na any Tonizia na any ivelany ary mampatsiahy fa nifindra monina tany Israely ny Jiosy Toniziana an'arivony ary tokony hodinihina.
Mihevitra izy fa tokony hankatoa an'i Israely i Tonizia ary manokatra biraon'ny solontena eto, sy manohy manery an'i Isiraely hiverina any amin'ny sisintanin'ny taona 1967.
Mino izy fa tsy tokony terena hisafidy eo amin'ny Palestiniana na ny Toniziana-Isiraeliana ny Toniziana.
Tamin'ny fanamarihana maivamaivana sy kanto kokoa, Tunizika, fandraketana hira Toniziana, namoaka ny fizarana faha-15 tamin'ny mozika avy amin'ny BeskAra, Good Morning Babylones, Mourad Sliti, SKR ary Emir. Manana fanadihadiana ihany koa izy ireo manontany ny hevitry ny olona raha ekena ny manana tononkira mazava ao amin'ny mozika Toniziana ambanin'ny tany.
Swifty manoratra momba ireo tetikasa teknolojiam-baovao Arabo sasany mba hamoronana fitenim-pandrafetana (“langage de programmation”) sy rafi-piasana amin'ny teny Arabo manontolo,  izay niasan'ny Al Khawarezmi, vondrom-piarahamonina teknolojiam-baovao Arabo, sy ny eritreriny fa hevitra tsara izany.
Mochekes milaza amin'ireo mpianatra fa ny hoe filàna diplaoma eny amin'ny oniversite mba hahazoana asa dia somary lainga , ary ny tena ilaina tokoa dia ny fifandraisana, ny fitiavana ny asanao, ny fahafantaranao ny fivoarana, ny fahaizana mifandray tsara, manao izay ilaina ary eo amin'io fotoana io.
Amin'ny fiadiana ny amboara eran-tany Alemà taona 2006, miha-maro ny vaovao hita ao amin'ny WorldCupBlog, Bassem, bilaogera Toniziana mitantara ny fifantenana ny ekipa Toniziana, namoaka ny lisitr'ireo mpilalao izay handrafitra ny ekipam-pirenena Toniziana amin'ny Amboara Erantany amin'ity fahavaratra ity, araka ny nambaran'ny mpanazatra ny ekipa, Roger Lemerre.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/10/31/128811/
 tokony tohizan'ny governemanta sy atao ofisialy ny maha-laika an'i Tonizia : http://zizoufromdjerba.blogspot.com/2006/05/pour-une-tunisie-laique.html
 tokony hampidirina ao amin'ny rafi-pianarana ambony Toniziana ny saram-pianarana: http://tarek-cheniti.blogspot.com/2006/05/education-in-tunisia.html
 ny fomba fijeriny i Mars fa tokony hanatsara ny fifandraisana amin'i Isiraely i Tonizia: http://yapasmoyendeprendrelepseudoquejeveux.blogspot.com/2006/05/pour-la-normalisation-tuniso.html
 fandraketana hira Toniziana, namoaka ny fizarana faha-15 : http://tunizika.blogspot.com/2006/05/tunizika-15.html
 tetikasa teknolojiam-baovao Arabo sasany mba hamoronana fitenim-pandrafetana (“langage de programmation”) sy rafi-piasana amin'ny teny Arabo manontolo,: http://swifty.blogsome.com/2006/05/20/entering-the-advanced-it-area-era-with-arabic-letters-is-it-a-dream/
 Al Khawarezmi, : http://www.alkhawarezmi.com
 filàna diplaoma eny amin'ny oniversite mba hahazoana asa dia somary lainga: http://mochekes.blogspot.com/2006/05/message-pour-les-tudiants-ou-nouveaux.html
 lisitr'ireo mpilalao izay handrafitra ny ekipam-pirenena Toniziana amin'ny Amboara Erantany : http://tunisia.worldcupblog.org/group-h/tunisia-squad-announced.html